लिलामदन अस्पतालका डाक्टर भन्छन्– ‘ब्लैकमा औषधी ल्याएर बेच्छु, बील दिन मिल्दैन’
सबिन यादव, सिरहा । प्रदेश नम्बर २ को सिरहा जिल्लास्थित रहेको लिलामदन अस्पतालका चिकित्सक एवम् सँचालक समेत रहेका डा. दिलीप कुमार साहले ५ लाख २१ हजार दिनु नै पर्ने अडान राखेका छन् ।
समाचार आएपछि सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहालाई निर्देशन दिएर सो सम्बन्धमा बुझन भन्दै बन्धक बनाइएका मुखिया परिवारलाई तत्काल अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको थियो ।
शुक्रबार अबेर साँझ नै अस्पताल प्रशासनले सिडिओ कणेलको निर्देशनपछि घर जान दिएपनि शनिबार इलाका प्रहरी कार्यालय लहानमा भएको दुई पक्षीय छलफलको क्रममा अस्पतालका सँचालकले माग गरिएको रकम दिनु नै पार्ने अडान राखेपछि बिना निष्कर्ष छलफल टुङियो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका प्रमुख डा. तपन दाहालको नेतृत्वमा भएको छलफलको क्रममै अस्पतालमा सँचालक दिलीप साहले आफू ईण्डियाबाट ब्लैकमा औषधी ल्याएर बेच्ने गरेको स्वीकारेका छन् ।
इलाका प्रहरीमा गरिएको छलफलको क्रममा हाम्रा सहकर्मी पत्रकार सबिन यादवले गरेको स्टीँग अपरेशनको क्रममा उनले भारतबाट ब्लैकमा औषधी मगाएर बेच्ने गरेको स्वीकारेका छन् ।
औषधी ब्लैकमा ल्याएर बेच्ने गरेको भन्दै औषधीको बील पनि दिन नमिल्ने बताएका छन् । परिवारजनले ५ लाख २१ हजारको बील मागेपछि अस्पतालले बिल दिन मानिरहेका छैनन् ।
सिरहा प्रशासनले शुक्रबार सिरहा नगरपालिका वडा नम्बर १० बस्ने सुरेश मुखियालाई १ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बाँकी राखेको भन्दै अस्पतालमै बन्धक बनाएको अवस्थामा बन्धकमुक्त गराएको थियो ।
तर, शनिबार नै अस्पतालका सँचालक दिलीप साहले भारतबाट ब्लैकमा औषधी ल्याएर अस्पतालमा बेच्ने गरेको आफ्नै मुखले स्वीकारोक्ती गरेपछि कानुनको सिकन्जा झन कसिने बुझिएको छ ।
भारतबाट आउने औषधीमा लाग्ने राजश्व छली सहित विना प्रक्रियाको औषधी ओसार पोसार कार्यमा सँलग्न साबित भए कानुनी कारवाही हुनेछ । झन ब्लैकमा औषधी ल्याएर बेचेको पाइए कारवाहीको दायरामा आउन सक्ने बुझिएको छ ।
यता, गरिब मुखिया परिवारलाई अस्पतालबाट बन्धकमुक्त गराएका सिरहाका सिडिओ प्रदीपराज कणेलले भने उनलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् । असाधारण रुपले रकम लिएको पाईएमा बाँकी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
औषधी ब्लैकमा ल्याएर अस्पतालमा बेच्ने गरेको सन्दर्भमा सिडिओ कणेलले उसले कहाँबाट ल्याउँछ त्यसको पनि खोजबिन हुने बताए । उनले भने,–“बढी रुपैयाँ लिएको छ भने फिर्ता पनि गर्नुपर्छ र गैर कानुनी ठहरिए कारवाही पनि हुन्छ ।”
सो क्रममा लहानका डिएसपी डा. तपन दाहालले भने मुखिया परिवारलाई नै मुद्दा मामिला सम्बन्धी भनेर असहज महसुस गराएको बताइएको छ ।
सिडिओ कणेल यसघटनाप्रति सक्रियता देखाएका छन् भने आईतबार यसको टुँगो लाग्ने बुझिएको छ ।
के छ घटना ?
सिरहा जिल्लाको लहानस्थित रहेको लिलामदन पिसी एण्ड प्रसुति गृहमा औषधी उपचारमै ५ लाख बढी रकम जोडेपछि घटना बाहिरिएको थियो ।
सिरहा नगरपालिका वडा नम्बर १० नरैया बस्ने सुरेश मुखियालाई स्वासप्रस्वासमा समस्या भएपछि लिलामदन अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । भर्ना गरिएको १४ दिनपछि उनको बील ५ लाख २१ हजार रुपैयाँ आएपछि परिवारजनले पत्रकार गुहारेको थियो ।
अस्पतालका सँचालक समेत रहेका डा. दिलीप कुमार साहले ३ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझेको र बाँकी १ लाख ५१ हजार रुपैयाँ अझै दिनुपर्ने भन्दै विरामी बन्धक बनाएको थियो ।
अभिभावकबाट असाधारण तरिकाले रकम मागेपछि मुखिया परिवारले सहयोगको लागि गुहारेका थिए । कर्जा ऋण लिएर ४ लाख ७० हजार रुपैयाँ जुटाएको मुखिया परिवारले थप १ लाख ५१ हजार रुपैयाँ तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
साँस फेर्न अप्ठयारो हुँदा अन्दाजी २३ बर्षिय सुरेश मुखियालाई १५ दिनअघि सो अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । औषधी उपचारकै नाममा ३ लाख ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको मुखिया परिवारसँग थप १ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मागेपछि रुन थालेको थियो ।
त्यसपछि समाचार प्रकाशित भएपछि सिरहाका सिडिओ प्रदीपराज कणेलले स्थानीय प्रशासनलाई घटना बारे बुझेर तत्काल विरामी परिवारलाई बन्धकमुक्त गर्न निर्देशन दिएपछि शुक्रबार अबेर साँझ बन्धकमुक्त गरिएको थियो ।